Izay voasoratra dia voasoratra… | NewsMada
Izay! Iny navoakan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) iny ny voka-pifidianana ofisialy tamin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika. Didim-pitsarana tsy azo ivalozana. Amin’izany, mbola hisy ihany ve ny hanohitra? Na hanao hetsika an-dalambe… Zo izay, saingy misy ny lalàna. Hanao ahoana? Ho hita eo…
Na ahoana na ahoana, arakaraka ny fifandanjan-kery ihany io: politika. Eny, na eo aza izay lazaina ho lazon’ady. Ny rariny itompoana, mody ho heloka; ny heloka ibabohana, mody ho rariny. Eo hatrany izay heverina ho ara-dalàna, soatoavina, fandehanana amin’ny fahendrena sy fitandremana, fitsinjovana ny soa iombonana…
Amin’izany, raha misy àry ny mandeha an-jambany noho ny fitompoana teny fantatra, ndeha hivoaka amin’ny ara-dalàna ve? Izay no mahatonga ny hoe manakorontana, mandrava, mampihemotra… Izany moa no inona? Tsy misy antony anaovana sy irotsahana amin’ny fifidianana raha tsy itokisana izay mikarakara azy.
Misy ny tsy maty raha tsy misy mamosavy? Na tsy resy raha tsy misy hosoka, na tsy mandresy raha tsy misy hala-bato… Tsy mety misy raharaha amin’ny ara-dalàna sy ara-drariny izany? Manjaka ho azy ny fifampiahiahiana lava. Ahoana koa no itokisana fa marina izay atao sy lazain’ny tena, raha ny hafa aza tsy atokisana?
Ho zava-doza ny fiainam-pirenena raha samy hanao toy izay saim-pantany avokoa izay afa-miteny sy afa-mihetsika rehetra. Izay no anisan’ny antom-pijoroan’ny andrimpanjakana isan-tsokajiny ho amin’ny fandaminana, fifampifehezana, fisaraham-pahefana… Amin’izany, tsy misy ny hoe ambonin’ny lalàna, didim-pitsarana…
Ilaina ny mianatra sy mifampiteny ary mifampifehy amin’ny fanajana sy fampiharana ny lalàna. Izay voasoratra dia voasoratra, izay mandresy dia mandresy, izay voafidy dia voafidy…. Tsy efa mila atrehina amin’izay ve izao ny fanarenana sy fanorenana firenena? Fa tsy famarinana na famerenana amin’ny lasa indray…